ओलीको मात्र होईन सिस्टमकै विकल्प खोजौँ - firewordsdaily
बहुमतको शक्तिशाली सरकारले अहिलेसम्म गरेका कामहरू हेर्दा, कोभिड १९ हुंदै सलह किरासम्म आइपुग्दा सरकार पूर्णरूपमा असफल भएको छ । मानवीय जीवनसंग जोडिएका विषयहरू कोरोना महामारीमा माक्सदेखि स्वास्थ्य सामाग्री खरिदसम्म, विदेशबाट अलपत्र परेका नेपालीहरू फर्काउॅंदादेखि क्वारेन्टिनमा राख्दासम्म सरकारका मन्त्रीहरू लगायत बिचौलियाहरूले अरबौं रूपैया खाएका छन् । कुनै संवेदनशीलता छैन, सबैतिर भ्रष्टहरू
छन्, जतिसको सय पचासदेखि अरबौं खरबौं लुटिरहेका छन् । राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् त्यसैले यो सरकार निकम्मा भएको छ । ओलीले निम्न मध्ये एक विकल्प रोजुन् ।
१. भ्रष्ट र असक्षम मन्त्रीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गरी असल नियत भएका सक्षमहरू मध्येबाट मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गर्ने ।
२. प्रधानमन्त्रीपदबाट राजीनामा दिने ।
३. अन्तिम तर उत्तम बिकल्पः–
प्रचण्डले ३२ वर्ष पार्टीको नेतृत्व गर्नु भो, २ पटक प्रधानमन्त्री हुनु भो । माधब नेपालले १६ वर्ष पार्टिको नेतृत्व गर्नु भो, प्रधानमन्त्री हुनु भएकै हो । झलनाथ खनालले १३ वर्ष पार्टि नेतृत्व गर्नु भो, प्रधानमन्त्री हुनु भएकै हो । शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ, ४ पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएकै हो । स्वयं ओलीकै पनि यो दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्व हो । विभिन्न पार्टीका धेरै प्रधानमन्त्री, सयौं मन्त्री र संसदहरू जनताले हेरी, भोगिसकेकै हो । सबैको कार्यशैली आचरण, योग्यता, क्षमता सबै जनतालाई, कार्यकर्ताहरूलाई थाहै छ । त्यसैले यो सिस्टम नै असफल भयो । जो गएपनि भ्रष्टै हुने फेल नै हुने जनता झुक्याई नै मात्र रहने । भाषणले मात्रै मुलुक कसरी बन्छ ? त्यसैले हाम्रा नेताहरूमा मात्र होईन यो सिस्टममै समस्या छ ? भ्रष्टाचार र फोहोरी खेलहरू धेरै भए अव के.पी. ओलीको मात्र होईन यो सिस्टमको विकल्प खोजौं ।
बिकल्प के ?
संविधान संसोधन गरी वर्तमान संसद भंग गरौं, गैरदलीय व्यक्तित्वको नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन गरौं र प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद को निर्वाचन गरौं । शक्तिशाली आयोग बनाई असल र ईमान्दार व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गरौं । २००७ साल यताका सबै नेता र कर्मचारी र नव धनाड्यहरूको संम्पति छानबिन गरी जफत गरौं । राष्ट्रियकरण गरौं । यसो हुॅंदा खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले भित्र्याएको विकृति, कार्यकर्तामुखि प्रवृत्ति र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनुका साथै अंकगणितीय फोहोरी राजनीतिको पनि अन्य हुन्छ । यत्ति गर्ने ॲाट के.पी. ओलीले गरून् ईतिहासमा ओली अमर हुनेछन् । अन्त्यमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नेपालको नक्सा जारी गर्ने साहस गरेकोमा ओलीप्रति मेरो उच्च सम्मान छ
नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको क्षमता पुरानो राजनीति भन्दा नाजुक: दीप जैशी